I-Cozy Beach Elite🏖 yaBucala yoLwandle iApt 🌊 - I-Airbnb
I-Cozy Beach Elite🏖 yaBucala yoLwandle iApt 🌊
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRasha
Indawo yabucala yeCozy Beach Elite inendawo ephambi kolwandle enombono ogcweleyo wokufikelela kuLwandle oluBomvu kunye neentaba zentlango. Ime ngokugqibeleleyo kwindawo ezolileyo yegadi ye-Eel emelene ngqo nenye yezona ndawo zixabisekileyo zokuntywila eSinayi.
Le yeyona ndawo ithandwayo yeendwendwe zethu zeDahabhi, ngokutsho okuzimeleyo.
I-Cozy Beach Elite yabucala iqhayisa ngendawo eselunxwemeni enembono epheleleyo yoLwandle oluBomvu kunye neentaba zentlango. Ime ngokugqibeleleyo kwindawo ezolileyo yegadi ye-Eel emelene ngqo nenye yezona ndawo zixabisekileyo zokuntywila eSinayi. Uhambo olufutshane kuphela olunembonakalo entle yokuya kwiivenkile zalapha eDahab, iivenkile zokutyela, iikhefi kunye neebhari ezinemisebenzi emininzi yangaphandle ukuze ukonwabele kubandakanya ukuqubha, ukusefa, ukusefa, ukuntywila emanzini, kunye nokuntywila emanzini.
4.70 out of 5 stars from 109 reviews
4.70 · Izimvo eziyi-109
Ummandla wobutofotofo beCozy Beach Elite ibekwe kwindawo yabucala, ezolileyo, ekhuselekileyo nekhuselekileyo edibanisa ubutofotofo bale mihla ekunika indawo efanelekileyo yokuphumla kunye ne-ambience ejikelezileyo. Kuphela kuhambo olufutshane kunye nokubukekayo ukuya kwiivenkile zasekhaya zaseDahab, iiresityu, iikhefi kunye neebhari ezinemisebenzi emininzi yangaphandle onokuyonwabela.
Umbuki zindwendwe ngu- Rasha
Ihlala ikhona kwiindwendwe.